यी अमेरिकी महिला, जस्ले १० विवाह गरे पनि 'सक्षम पति' भेट्टाएनन् ! | यी अमेरिकी महिला, जस्ले १० विवाह गरे पनि 'सक्षम पति' भेट्टाएनन् ! |
यी अमेरिकी महिला, जस्ले १० विवाह गरे पनि ‘सक्षम पति’ भेट्टाएनन् !
उज्यालो प्रतिनिधि १५ कार्तिक २०७७, शनिबार रोचक बिचित्र
वासिङ्टन । अमेरिकाकी ५६ वर्षीया लेडी केसीले अहिलेसम्म १० बिवाहहरू गरिसकेकी छिन्, तर उनले अझैसम्म ‘सक्षम पति’ वा ‘मिस्टर राइट’ पाइनन्। उनी चाहन्छिन कि उनले एक उपयुक्त पति खोजेका छन कि जसले सधैं आफुले जस्तै माया गरोस । अब उनी आफ्नो ११ औ श्रीमानको खोजी गर्दैछिन। केसी विवाहको सिलसिला जारी राख्नको लागि मूडमा छन् जबसम्म कि उसले एक ‘योग्य दुलहा’ भेट्टाउँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस् ... जहाँ १४० रुपैयामा घर किन्न सकिन्छ !
केसी, जसले भर्खरै उनको १० औं पति छोड्ने घोषणा गर्छिन्, उनी अहिलेसम्म कति विवाह गरेका छन् भन्नेमा चिन्तित छैनन्। उसको इच्छा केवल ‘सक्षम पति’ हो । केसीको सबैभन्दा लामो विवाह आठ वर्षसम्म चल्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... विवाह गर्न तीन महिनाको कोर्स पास गर्नुपर्ने !
केसी केही दिन अघि जब उनी ‘डा. फिलको च्याट कार्यक्रम’मा सामेल भइन, उनले कसरी दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम राख्न र राख्ने तरिका सिके। शोमा उनले भनिन् कि “पर्याप्त भयो।” म सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहन्छु।
यो पनि पढ्नुहोस् ... मृत्युसंग किन डर लाग्छ ? मृत्यु पछि के हुन्छ ?
केसीको पहिलो विवाह जीवन आठ वर्ष र दोस्रो सात बर्ष थियो। तेस्रो एक करिब दुई र आधा वर्ष चलेको थियो। उनको तेस्रो पतिबाट पनि एक छोरा थियो। ती दुईबीचको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो जब पतिले उनलाई आफूले प्रेम गरेको कुरा बताउन छाडे।